Posted by Tranquillus | Feb 22, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Kadib markaad soo marto noocyada fasaxa ee kala duwan ee aad xaq u yeelan karto. Fasax Sabatical waa aaladda u eg mid adiga kugu habboon xaaladaada gaarka ah. Waa tan tusaalaha warqad si aad ugu dirto shaqo-bixiyahaada iyadoo la doorbidayo qirashada rasiidka si looga fogaado wixii khilaaf ah ee aan loo baahnayn. Waxaa suurto gal ah in heshiiska wadajirka ah ama heshiisyada ku dhex jira sanduuqaaga ay qeexaan waqtiyada kama dambeysta ah. Xaaladahan shuruudahu waxay cadeyn doonaan da'da dalabkaaga.
Tusaale diyaar u ah in loo isticmaalo codsi fasax fasax la’aan.
Cinwaanka Magaca Dambe Magaca hore
Nambar Boostada iyo Magaalada
Magaca awoowe iyo magaca koowaad ama magaca ganacsiga ee qaataha
Warqad diiwaangashan oo leh A / R
shay : Codsi fasax fasax la'aan
Sharaf ayey ii tahay inaan codsado fasax mushahar la'aan muddo ah (tirada maalmaha). Haddii aadan wax diidmo ah lahayn, waxaan jeclaan lahaa in fasaxa uu ku bilowdo (ka tag taariikhda bilowga) in la joojiyo (sheeg taariikhda ugu dambeysa ee fasaxa).
Shaqaalaha shirkadaada sida (caddee cinwaanka booska uu hayo) laga bilaabo (Sii taariikhda bilawga waxqabadka shirkadda dhexdeeda), Waxaan marwalba muujiyey daacadnimo iyo adkaysi gudashada waajibaadkayga. Waxaad ka dhex arki kartaa shaqadayda, dadaalkayga iyo hamigeyga ku aadan ka qeybqaadashada horumarka bulshada heerarka oo dhan.
Hada, kadib (Muuji tirada sano ee shaqada shirkadda) adeeg daacad ah, waxaan dareensanahay inaan ku qancay shaqadayda. Qiimaha ay wadaagaan shirkadda dhexdeeda waxay si buuxda ugu habboon yihiin aaminsanahayda waxaana diyaar u ahay inaan wax badan ku soo kordhiyo guusha shirkadda.
Si kastaba ha noqotee, hadda waxaan haystaa dhibaato shaqsiyadeed oo jilicsan oo u qalma dareenkayga buuxa. Haddaba si aan nafteyda ugu tiiriyo waxa aan ka tirsanahay ee shirkadda isla markaana aan ku sii wado shaqada sida ugu habboon, waxaa gabi ahaanba lagama maarmaan noqotay in aan dhibaatadan horumaro. Runtii (si kooban u sharax nooca dhibaatada).
Inaad awood u yeelatid inaad si buuxda u maal gasho xallinta xaaladdan ama (si aan sifiican ula dhaqmo), Waxaa waajib igu ah in aan si ku meelgaar ah u hakiyo hawlahayga shirkadda dhexdeeda. Sababtaas awgeed ayaan kuugu soo dirayaa codsigan fasax la'aan. Tani waa waqtigey igu qaadataa (iska ilaali cudurkayga ama jirrada qof aad jeceshahay) ama (saxo ama xallinta dhibaatada si sax ah).
Si buuxda ayaan uga warqabaa in aanan dalban karin nooc kasta oo nooc ah oo nooc nooc ah inta lagu jiro muddadan. Intaas waxaa sii dheer, muddadan looma tixgelin doono sidii wax-ku-oolnimada waqtiga shaqeynta taas oo ii oggolaan doonta inaan ka faa iideysto maalmaha mushaarka la qaato. Dhamaadka muddadan, waan ku laaban karaa booskeyga hadda sida ku qeexan xeerka shaqaalaha.
Markaa maqnaanshahayga oo aan u keenin wax carqalad ku ah howlaha caadiga ah ee howlaha ka dhex dhaca shirkadda dhexdeeda, waxaan ballan qaadayaa in aan fuliyo iyada oo la raacayo qaanuunka farshaxanka, ku wareejinta saaxiibkay kaas beddeli doona. Intaa waxaa sii dheer, waxaan jeclaan lahaa inaan tilmaamo in dhammaan faylasha sugaya ee heerkayga la hakin doono ka hor bixitaankayga.
Waxaan si buuxda u fahamsanahay inaadan ku lahayn waajibaad inaad ka jawaab celiso codsigeyga. Si kastaba ha noqotee, waxaan aaminsanahay xukunkaaga waxaanan ku kalsoonahay inaad fahanto xaaladdayda.
Fadlan raadi lifaaqan dukumiintiga taageeraya ee kuu oggolaanaya inaad si fiican u falanqeyso codsigeyga. Si kasta oo ay tahay, anigu waxaan ahay mid adiga dhan ugu diyaar ah wixii macluumaad kale ah ama dukumiinti dheeraad ah ee aad u baahan karto.
Waxaan kaaga mahadcelinayaa dantaada aad ka qabto codsigeyga, fadlan aqbal, Maamulaha Madam, dareenkeyga ixtiraamka badan leh iyo mahadsaniddayda qotada dheer.
Magaca koowaad iyo kan dambe
Soo deji "Tusaale u diyaarsan in la isticmaalo codsiga fasaxa aan la bixin"	tusaale-u diyaarsan-in-a-isticmaalka-codsi-codsi-ka-tagga-lacag-la'aan.docx - La soo dejiyay 525 jeer - 14 KB
READ Template warqad si aad u soo sheegto khalad ku jira diiwaankaaga mushaharka
Tusaale boosta si aad u codsato fasax fasax la'aan. Febraayo 13, 2022Tranquillus
horeNoocyada kala geddisan ee fasaxa, goorma iyo sidee looga faa'iideysan karaa?
socdaWaxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Fasaxa Gaarka Ah